ပြောင်းလဲခြင်း HOW TO CHANGE? | Shwe Canaan TV
ပြောင်းလဲခြင်း HOW TO CHANGE?
00Truth Wednesday, 16 March 2016
အခန်း (၉) လူဟောင်းအကြောင်းနဲ့ လူသစ် အကြောင်း အခြေခံကျတဲ့ အချက် တစ်ချို့ကို လေ့လာပြီးတဲ့နောက်၊ လူဟောင်းဘဝကနေ လူသစ်ဘ ဝကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်...
အကြောင်း အခြေခံကျတဲ့ အချက်
ချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ လူ
ဟောင်းနဲ့လူသစ်ဟာ နည်းနည်းပါးပါးမဟုတ်ဘဲ လုံးဝကို ဆန့်ကျင်ကွာခြားလှပါတယ်။
နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ဇာတိပကတိမွေးသောအရာသည် ဇာတိ ပကတိဖြစ်၏။
ငါတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် စပ်ဆိုင် သည်ကို၄င်း၊
လောကီသားအပေါင်းတို့သည်မာရ် နတ်လက်၌ရှိကြသည်ကို၄င်း၊ ငါတို့ သိကြ၏။
ထိုကာလအခါ မြေမှုန့်၌ အိပ်ပျော် သော သူများတို့သည်နှိုးကြလိမ့် မည်၊အချို့တို့ကား ထာဝရ အသက် ရှင်ခြင်းနှင့်၄င်း၊
အချို့တို့ကား ရှက်ကြောက်ခြင်း၊ ထာဝရ အသရေပျက်ခြင်းနှင့်၄င်း၊ နှိုးကြလိမ့်မည်။
ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်သော သူ တို့သည် အသက်ရှင်ရာ ထမြောက် ခြင်းသို့၄င်း၊
ဆိုးယုတ် သောအကျင့်ကိုကျင့်သော သူတို့သည် အပြစ်စီရင်ရာ ထမြောက် ခြင်းသို့၄င်း ထွက်ရကြလတ္တံ့။
ယေရမိ၊ ၁၃း၂၃ မှာ – ကပ္ပလီတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့အသားရောင် ပြောင်းသွားအောင်၊ ပြီးတော့ကျားသစ်ဟာ သူ့ကိုယ်ပေါ်က အကွက်ကျားတွေ ပျောက်သွားအောင် မလုပ်နိုင်သလို လူဟာလည်း ကိုယ့်အပြစ်ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် မပြုပြင်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ အပြစ်တွေကို ကြိုးစားရှောင်ရှားနိုင်ရင်တောင် အပြစ်တွေကိုတော့ မပြုပြင်နိုင်ပါ။
အပြစ်သားအဖြစ်နဲ့ မွေးဖွားလာသူဖြစ်တာကြောင့် အပြစ်နဲ့ကင်းစင်အောင်လည်း ဘယ်လိုမှနေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အခုကစပြီး အပြစ်မလုပ် တော့ဘဲ နေနိုင်မယ်ထားပါဦး၊ အရင်အချိန်တွေမှာ အပြစ်တွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့အတွက် အပြစ်ကင်းတဲ့ အသက်တာကတော့ မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်း ထင်ရှားနေ ပါတယ်။ တိပ်ခွေထဲမှာ အသံသွင်းနေတုန်း မှားသွားရင် အဲဒီအမှားကိုပြုပြင်ရင်း အမှန်ကိုပြန်သွင်နိုင်ဖို့အတွက် တိပ်ခွေကို ပြန်ရစ်ရတယ် မဟုတ်လား။
ဒါပေမယ့် ခက်တာက ကျွန်တော်တို့ ဘဝတွေကို တိပ်ခွေလို ပြန်ရစ်လို့ မရနိုင်တဲ့အတွက် မှားပြီးခဲ့တာတွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ဖျက်ပစ် လို့မရနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့လုပ်တဲ့ကောင်းမှုဟာ ဒီနေ့အတွက် တာဝန်ကျေရုံမျှလောက်သာ ဖြစ်တာပါ။
အပြစ်နဲ့မကင်းနိုင်သလို စာတန်လက်ထဲကနေလည်း မလွတ်နိုင်ပါဘူး။ တစ်လောကလုံးဟာ စာတန်ရဲ့အုပ်စိုးမှုအာဏာအောက်မှာ ရှိနေတာ ကြောင့် လောကီသားဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ စာတန်လက်ထဲက လွတ်အောင်အဘယ်အရပ်ဒေသကို ထွက်ပြေးနိုင်မှာလဲ။ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး အကောင်းဆုံးကျင့်နေသူတွေတောင် စာတန်ရဲ့သားတွေပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ကျမ်းစာမှာ ဖော်ပြထားတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ် (ယော၊၈း၄၄)။ ဝိညာဉ်သေနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှင်သန်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ မြင်နေပေမယ့် ဘုရားရဲ့အမြင်မှာတော့ အသေကောင်မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သေနေသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ။
ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လူဟောင်းဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားကျင့်ကြံသမျှတွေကို “သေခြင်း နှင့်ဆိုင်သောအကျင့်(DEAD WORKS) လို့သာ မှတ်ယူပါတယ် (ဗြဲ၊၆း၁။ ၉း၁၄)။
“အဝတ်ဟောင်းကို အထည်သစ်နှင့် ဖာလေ့မရှိ” လို့ မဿဲ၊၉း၁၆မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ အဝတ်မှာ အပေါက်အပြဲတွေ ရှိနေတယ်။ ဒီအဝတ်ဟောင်းကို ဘယ်လိုပဲပြုပြင်ဖာထေးပြီး လျှော်ဖွတ်နေပါစေ အသစ်တော့ပြန်ဖြစ်မလာနိုင်တော့ပါ။ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့ ဘဝဟာ လည်း ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့ခြင်းနဲ့ ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းသာ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကိုယ်ကိုယ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ပြုပြင်ဖာထေးနေရတဲ့ သဘောကို တွေ့မိပါ လိမ့်မယ်။ နည်းနည်းသက်သာပြီး ကြည့်ကောင်းရှုကောင်းရုံလောက်သာ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြုပြင်ထားရတာဖြစ်ပေမယ့် အသစ်နဲ့တော့ တစ်ခြားစီပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့ခြင်းတရားနဲ့ ဆိုင်တဲ့ဘဝကို ကောင်းနိုးရာရာတွေ ရှာပြီးပြုပြင်ဖာထေးနေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက် အလိုအပ်ဆုံးကတော့ ပြုပြင်ဖာထေးစရာ လုံးဝမလိုဘဲ ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့ခြင်းနဲ့ ထာဝစဉ်ကင်းလွတ်တဲ့ ဘဝသစ်ပဲမဟုတ်လား။
ဆာလံ၊၁၀၇း၉ မှာ “တောင့်တသောဝိညာဉ်ကို ရောင့်ရဲစေ၍ မွတ်သိပ်သော ဝိညာဉ်ကိုလည်း ကောင်းသောအရာနှင့် ဝစေတော်မူ၏” လို့ ဆိုထားပါတယ်။
နောက်ဆုံးအာဒံဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က အာဒံရဲ့ အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့ လူဟောင်းဘဝ အဆုံးသတ်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းနဲ့ဆိုင်ပြီး ဒုတိယလူ ဆိုတာကတော့ လူသစ်ဖြစ်ဖွားစေခြင်းနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ သခင်ယေရှုရဲ့ ဖွားမြင်ခြင်း၊ အသေသတ်ခံခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတို့ဟာ ကမ်ဘာ့သမိုင်းမှာ ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။
အေဒီ –- ဘီစီဆိုပြီး ကမ်ဘာ့သက္ကရာဇ်ရဲ့ ဗဟိုချက်ဖြစ်ခဲ့သလို လူသားများအတွက် လူဟောင်းဘဝကနေ လူသစ်ဘဝကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ ဗဟိုချက်လည်း ဖြစ်တယ်။
-လုပ်ပေးပြီးပြီ ဆိုတာ ကျေးဇူးတော် သာသနာဖြစ်ပါတယ် (ဧဖက်၊ ၃း၂)။
ကော၊၁း၁၇ မှာ “..သင်တို့သည် ကြား၍ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူတော်ကို မှန်ကန်စွာ ဝန်ခံသောနေ့မှစ၍ ထိုသို့သော အကျိုးရှိ၏” လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဧပဖြဆိုသူဟာ ကောလောသဲမြို့မှာ ရှိနေသူတွေကို ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြပြောဆို သွန်သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
သူရဲ့ ဟောပြောသွန်သင်ချက်ကို ကြားရသူတွေဟာ ကြားရတဲ့တရားစကား မှန်ကန်မှုရှိကြောင်း မိမိတို့နဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ကြတယ်။ ဒီလို ဝန်ခံတဲ့အချိန်ကစပြီး ဧဝံဂေလိတရားရဲ့ အကျိုးကို သူတို့လက်တွေ့ ခံစားရရှိတယ်လို့ ကျမ်းစာက မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ဧဝံဂေလိတရားရဲ့ အနှစ်ချုပ်ဟာ ဘာလဲ။
-အဖြစ်မှ လွတ်မြောက်စေခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
-အပြစ်မှ လွတ်ဖို့အတွက် အသွေးတော်ဖြစ်ပြီး
-အဖြစ်မှ လွတ်ဖို့အတွက်ကတော့ ကားတိုင်တော်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုခရစ်၏ အသွေးတော်သည် ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကို ဆေးကြောတော်မူ၏ ဆိုတဲ့အတိုင်း အသွေးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ အပြစ်လွတ်ရပါတယ်။
Shwe Canaan TV: ပြောင်းလဲခြင်း HOW TO CHANGE?